चर्चित र महंगो टी–२० क्रिकेट: कहाँ हुदैँछ आईपिएल साउथ अफ्रिका,यूएई कि इगल्यान्ड ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
चर्चित र महंगो टी–२० क्रिकेट: कहाँ हुदैँछ आईपिएल साउथ अफ्रिका,यूएई कि इगल्यान्ड ?
प्रकाशित मिति: २० पुष २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं । चर्चित र महंगो टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) नजिकिदै छ । नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि सहभागि हुने भएकाले नेपालीका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ । यतिबेला भने क्रिकेटरभन्दा पनि प्रतियोगिता हुने स्थानका विषयमा चर्चा शुरु भएको छ । भारतमै गर्ने कि अन्य देशमा गर्ने छलफल हुन थालेको छ । किनकी भारतमा यो वर्ष लोकसभा चुनाव पनि हुदैँछ ।
आयोजक बिसिसिआईले पनि यस विषयमा छलफल शुरु गरेको छ । भारतमै गर्ने कि अन्य देशमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यदि भारतमा भएन भने कुन देशमा गर्ने भन्ने पनि चर्को बहस छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार, बिसिसिआईको टोलीले भारतीय खेल मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । त्यो बैठकमा बिसिसिआईका पदाधिकारीले अन्य देशमा प्रतियोगिता गर्ने सोचाइ बनाएको मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ । यसअघि पनि लोकसभा चुनावको बेला आईपिएल अन्य देशमा गरिएको थियो । २००९ मा साउथ अफ्रिकामा र २०१४ मा केही खेल यूएईमा र केही खेल भारतमै गरिएका थिए ।
बिसिसिआईका सिईओ राहुल जौहरीको निर्देशनमा मन्त्रालय पुगेको टोलीले सरकारको राय मागेको थियो । भारतबाट भन्दा बाहिर प्रतियोगिता गर्न सरकारको अनुमति लागि पनि चर्चा भएको छ । यस पटक अप्रिल पहिलो सातादेखि मे अन्तिम सातासम्म चल्ने छ । यहि समय लोकसभा चुनावको तयारी हुने छ । जसले गर्दा सुरक्षाको कारण भारतमा गर्न नसकिने पनि अडकल गरिदै छ ।
अन्य देशमा प्रतियोगिता गर्न परे तीन देश प्राथमिकतामा राखिएका छन् । बिसिसिआई स्रोतका अनुसार, पहिलो नम्बरमा दक्षिण अफ्रिका छ । यसअघि पनि प्रतियोगिता आयोजना गरिएकाले दक्षिण अफ्रिका पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । दोस्रो नम्बरमा यूएई छ । त्यहाँ पनि आईपिएल गर्न सकिने बिसिसिआईको ठहर छ । र तेस्रो नम्बरमा इगल्यान्डलाई राखिएको छ । इगल्यान्डमा विश्वकप पनि आयोजना हुने भएकाले यसलाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको हो ।